चितवनको इट्टाभट्टामा पुरिएर १जनाको मृत्यु, ८घाइते – Saurahaonline.com
चितवनको इट्टाभट्टामा पुरिएर १जनाको मृत्यु, ८घाइते
चितवन, २६ मंसिर ।पूर्वी चितवनको कालिकानगरपालिकावडा नं. ६ मिलिजुलीचोक स्थित बि.के. इट्टा उद्योगमा पुरिएर १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८जना घाइते भएकाछन् । आज मंगलबार दिउँसो करिब ४ बजे इट्टा भट्टाको इट्टा तयार गर्ने राउण्डमा काम गर्ने क्रममा राउण्डको भित्ता अचानक भत्किएर रोल्पा स्थायी घर भएकी ४० वर्षिय सलिना डाँगीको मृत्यु भएको हो । उनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स (पूरानो मेडिकल कलेज) अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सो घटनालगत्तै घाइतेहरुलाई चितवनको भरतपुर स्थित नारायणी सामुदायिक अस्पताल पु¥याइएको थियो । घाइते हुनेहरुमा कालिकानगरपालिका, सूर्यपुरकी कान्छीमाय ाबोमजन, कालिका–३ कि निर्मला थिङ, कालिका–१ कि सरिता बोमजन, रोल्पा घर भएका रिमा बुढामगर, भुप बहादुर पुन, दिलबहादुर क्षेत्री, दिपा पुन रहेका छन् । त्यस्तै भारत बिहार स्थायी घर भएकाअब्दुल रहिमको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
इट्टा भट्टामा मजदुरहरु पुरिएपछि तत्कालै एक्साभेटरले खनेर तत्कालउद्धार गरिएको उद्योगका संचालक श्याम कृष्णमहर्जनले जानकारी दिए । सो इट्टाभट्टामा केहीवर्ष अगाडि पनि राउण्डको आगोमा परि १ जनाको मृत्यु भएको र चट्याङका कारण पनि मजदुरहरुको मृत्यु तथा घाइते पनि भएको स्थानीयवासीले बताए । २५ वर्ष अगाडि देखि सोही स्थानमा संचालित सो उद्योगमाकरिब २ सय ५० कामदार कार्यरत रहेको उद्योगका मेनेजेर शेषकान्तपौडेलले जानकारी दिए ।